Akụkọ - Asọmpi Nka Ọrụ Yucera nke Mbụ
Asọmpi nka mbụ nke Yucera maka ihe ngọngọ zirconia bidoro na Julaị 12 nke, nke ụlọ ọrụ onye isi njikwa na -akwado. Ekewara ihe omume ahụ niile ụzọ atọ: ndebanye aha na nyocha, asọmpi saịtị, na foto otu na-enye onyinye. Ihe karịrị ndị asọmpi 30 na -arụ ọrụ dị egwu maka ihe mgbochi zirconia cad cam na ịpị nkụ, ịpịpụ iche iche oyi, nhazi ụdị, ibipụta na nkwakọ ngwaahịa, wdg.
Iji nweta nsonaazụ dị mma na asọmpi a, ndị ọrụ na ngalaba mmepụta na -eji oge ezumike ha amụ ihe ma na -eme ihe siri ike, na -abanye n'ime ndụmọdụ na usoro iji melite arụmọrụ ọrụ, na -atụpụta atụmatụ njikarịcha, meziwanye ụzọ ọrụ, na ndị niile na -asọrịta mpi n'asọmpi a na usoro imepụta ihe mgbochi mkpụrụ ọka zirconia. Ndị ọrụ Yucera gosipụtara ụdị ha ma gosipụta uru dị na asọmpi a. Mgbe asọmpi ọrụ a gasịrị, enwere otu ndị ọkachamara nka nwere nka siri ike, usoro ngwa ngwa, mma kwụsiri ike na ntụkwasị obi, gụnyere Luo Feifei, Fan Mingchun na Liu Feihu site na usoro ịpị nkụ, Zhao Xiaoduo site na usoro ịpịpụ iche nke oyi, na Jiang Kele onye sitere na nhazi nhazi ụdị, Li Wanxing, Li Jing, Zhong Yulian, ndị sitere na mbipụta na nkwakọ ngwaahịa. Otu a nke ndị ọrụ ibe pụtara ìhè mere ihe ha tụrụ anya ya, rụsie ọrụ ike wee tie igwe mmadụ ahụ n'oge asọmpi maka ngọngọ eze zirconia, wee merie n'asọmpi usoro nke ọ bụla, ma melite arụmọrụ oge arụ ọrụ nke ọkwá ọ bụla ruo opekata mpe 10%, nke setịpụrụ ihe atụ maka nkwalite nka ndị ọrụ maka ngọngọ oxide zirconia n'ọdịnihu, ma nyekwa ntụaka maka njikarịcha ụkpụrụ nke imepụta ngọngọ zirconia.
Ndị asọmpi niile gbakọrọ n'ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ahụ isonye na mmemme nturu ugo na elekere asatọ nke ụtụtụ na Eprel 19nke. Nke mbu, Maazị Liu, onye isi ụlọ ọrụ Yucera, kwuru maka asọmpi nka maka mgbochi zirconia eze wee kwupụta nsonaazụ na ogo asọmpi ahụ, ndị isi ngalaba mmepụta wee nye ihe nrite. Ndị ọrụ ahụ nyere onyinye ma were foto otu. Ngụkọta nke ndị asọmpi 7 meriri aha "Onye ọkpụkpọ Medal Gold" na asọmpi ọrụ a maka ngọngọ zirconia, wee nweta ihe nrite nke yuan 1,000 na ihe nrite asambodo. Ebumnuche nke mmemme a bụ ịkpọku ndị ọrụ niile ka ha were asọmpi nka ọrụ a dị ka ohere iji bulie ọganihu ngwa ngwa na ntụnyere, mmụta, ịchụkwudo, inye aka, na ịka nke ukwuu n'ime ngalaba ahụ, ma gbalịsie ike zụlite nkà dị mma na -amụ nka ọrụ, ma na -emeziwanye nrụpụta mmepụta ngwa ngwa maka ngọngọ multilayer zirconia, na -ahụ maka ogo zirconia block na mmezu nke ebumnuche dị iche iche enyela nkwado dị mma na mmepe ngwa ngwa nke Yucera.